အခန်း (၄) - BookCubicle
Question King အဆင့်ဆင့်ယှဉ်ပြိုင်ပွဲ
ကုရွှယ်လန်သည် အတန်ငယ်ကြာမှ အိမ်ထဲသို့ဝင်လာခဲ့ပြီး အိမ်အကူထံ ပဝါအားချွတ်၍ကမ်းကာပေးလိုက်၏။
အိမ်အကူသည် လှမ်း၍ယူလိုက်ရင်း. .
"ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းပဲ အားလုံးပြင်ဆင်လို့ပြီးပါပြီ ၊ အကုန် ဒုသခင်လေးကြိုက်တာတွေချည်းပါပဲ ၊ အခု စားကြတော့မလား ဒါမှမဟုတ်?"
ကုရွှယ်လန်၏ ဒေါက်ဖိနပ်ချွန်ချွန်မှာ စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းထက် နင်း၍ထား၏ ၊ ချိတ်ဆွဲထားသည့် မီးဆိုင်းမှာလည်း ကြမ်းခင်းထက်သို့ရောင်ပြန်ဟပ်လျက် မျက်စိစူးမတက်လင်းချင်းလို့နေသည်။ သူမသည် ရှေ့သို့နှစ်လှမ်းခန့်မျှတိုး၍ ရပ်လိုက်ပြီးကာမှ တဖန်နောက်ပြန်ဆုပ်လျက်ကိုယ်ကိုလှည့်ကာ ဆန်ကျင်ဘက်အရပ်စီ လျှောက်၍သွားရင်းမှ ပြောခဲ့လိုက်၏။
ရှဲ့ယွီသည် ရေချိုးခန်းအတွင်းမှာဖြစ်သည်။ ရေတွေမှာ ခေါင်းကနေစပြီး ဆံပင်တစ်လျှောက်စီးဆင်းကာကျလာနေလျက် တစ်ကိုယ်လုံးရွဲရွဲစိုလို့သွား၏။ ရေနွေးငွေ့တို့ကလည်း လေးဖက်လေးတန်ရှိ မှန်တံခါးချက်တွေထက်စီ မပြတ်ရေငွေ့ရိုက်ကာနေသည်။
လက်ဆေးကန်ဘေးနား ချထားခဲ့သည့် ဖုန်းမှာတော့ တစ်ဒွီဒွီမြည်သံဖြင့် တုန်ခါလျက်ရှိနေ၏။
သူသည် မျက်ဝန်းတို့အား မှေးမှိတ်ထားလျက်မှ ကိုယ်ထက်က အနည်းငယ်ကျန်ရှိနေသေးသည့်ဆပ်ပြာမြှုပ်များကို ဆေးကြောပစ်နေစဉ် တံခါးခေါက်သံနှစ်ချက် ပေါ်ထွက်လို့လာသည်။ဆက်လက်ပြီး အိမ်အကူ၏ မဝံ့မရဲနှင့် သိမ်မွေ့လှသည့်အသံမှာ တံခါးပေါက်အားထိုးဖောက်လျက်မသဲမကွဲဝင်ရောက်လို့လာလေတော့၏။
"ဒုသခင်လေး ၊ ထမင်းစားလို့ရပါပြီ။"
"အဲ့ဒါ. . . . . . ဒါပေမယ့် မမကြီးက. . . . . ."
ရှဲ့ယွီသည် မျက်ဝန်းတို့ကိုဖွင့်လိုက်ပြီး နောက်တစ်ခေါက် ထပ်၍ပြောလိုက်သည်။
အားဖန်း ကျုံးအိမ်သို့ရောက်သည်မှာ (၂)နှစ်ပင်မပြည့်သေးပေ။ မကြာသေးဘူးဟုလည်း ပြော၍ရပြီးစကားပြောတာ ၊ အလုပ်လုပ်ရာတွေမှာလည်း အမှားမှားအယွင်းယွင်းဖြင့် ကြောက်ရွံ့ကာနေသေး၏။သူမစရောက်လာသည့် အချိန်တုန်းကလည်း ဘယ်သူ့ကိုမှမတွေ့ရသေးပေမယ့် ကျုံးအိမ်နှင့်ပတ်သက်သည့် ကောလဟာလတွေကိုတော့ မနည်းဘဲကြားပြီးဖြစ်သည်။
ပြောကြသည်မှာတော့ ကျုံးသခင်မကြီး သူ့ကိုယ်သူ သတ်သေသွားပြီးနောက် နှစ်အနည်းငယ်ပင်မကြာသေး သူဌေးကြီးကျုံးသည် နောက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား အိမ်သို့ခေါ်လာခဲ့သည်ဟူ၏။ ကုရွှယ်လန်ဟူသည့် ထိုနာမည်သုံးလုံးအား ပြောလျှင်တောင် မည်သူမျှမသိကြသေးပေ ၊ ရောက်လာတုန်းကလည်း သူ့အရင်ကလေးကိုပါ ခေါ်လာလိုက်သေးပြီး လူကြီးတစ်ယောက် ၊ ကလေးတစ်ယောက်ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုအမျိုးသမီးမှာ ကျုံးသခင်မ၏ နေရာထက်တက်၍နေသည်မှာ မြဲမြံလျက်ရှိပြီး အခြားသူတွေ မည်သို့ပင် ရယ်သွမ်းသွေးပါစေ ပြုတ်ကျမသွားပဲရှိ၏။
ကျုံးအိမ်၏ အကြီးဆုံးသား သခင်လေးတစ်ယောက်သာ သနားဖို့ကောင်းသည် ၊ အမေလည်း မရှိတော့သည့်အပြင် အခြားသူတွေ အိမ်ပေါ်တက်၍နေသည်အားလည်း မြင်တွေ့နေရရှာသည်။
ပြန်လာခဲ့ပြီး အကြောင်းပြန်ရမည့်အချိန်၌မူ သူမသည် အဘယ်သို့ပြောရမည်မသိစွာဖြင့် ခေါင်းကိုသာငုံ့ထားမိလျက် ထမင်းစားပွဲဘေး၌ရပ်လို့နေမိသည်။ အချိန်ကြာသည်အထိတိုင် စကားတစ်လုံးမျှထွက်မလာခဲ့ချေ။
ကုရွှယ်လန်သည် သူမ၏အမူအရာကိုကြည့်ပြီးနောက်တော့ နားလည်လို့သွား၏။ သူသည် တူကိုကောက်ကိုင်လိုက်ပြီးနောက် ပြောလိုက်မိသည်မှာ ဂရုမစိုက်သလိုပုံစံပေါက်သွားခဲ့သလားတော့မသိ။
"စားချင်ချင် မစားချင်ချင် သူဗိုက်ဆာတဲ့အချိန်ကြ. . . . . . မင်းသွားလို့ရပြီ။"
ရှဲ့ယွီ အင်္ကျီဝတ်လို့အပြီးတွင် ဆံပင်တွေကတော့ မခြောက်သေးပဲ ရေတစ်စက်စက်ကျလို့နေဆဲပင်။ ဟို ဆန်းပြားလှပါသော ဂိမ်းအား download ဆွဲကြည့်ရင်ဘယ်လိုနေမလဲကိုလည်း ကြည့်ချင်နေမိရ၏။ ဖွင့်လိုက်သည့်အခါမှာတော့ wechat message noti တွေကိုသာသွား၍တွေ့ရာ တစ်ချက်ဝေ့ကြည့်လိုက်မိပြီး game download ဆွဲရမည့် linkကိုတော့ဖြင့်ရှာလို့မတွေ့သေး။
Group chat တစ်ခုဖြစ်သည့် 'အမြဲ သတ်မနေကြနဲ့' အမည်ရှိ groupတွင်တော့ message တွေ 99+ တောင်ရှိလို့နေသည်။
[Barbecueမင်းသားလေး • Lei] : Oh my god. . အဲ့ကောင် ပညာသားအတော်ပါတယ် ၊ ငါနဲ့ ဆုံလိုက်စမ်းပါ ၊ တွေ့တာနဲ့ ချပြီပဲ။
[လေကျစ်၏ အဖေ] : ငါ့သား တော်တယ်! သတ္တိအပြည့်ရှိတယ်!
[လေကျစ်၏ အမေ] : ပြန်မထနိုင်အောင်ကို ချပစ်စမ်း ၊ ဒီလအနည်းငယ်အတွင်းကို သူ့ကိုယ်သူအစ်ကိုကြီးဆိုပြီး ကြွစောင်းစောင်းလုပ်နေတာဆိုတာ။
ကျိုးသာ့လေတို့ တစ်အိမ်သားလုံးပဲ ညီနေလိုက်ကြတာ။
ရှဲ့ယွီ အထက်အောက်ဆွဲကြည့်မိသော်လည်း အကြောင်းအရာတို့မှာ အနည်းနဲ့အများတော့အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
ဟူကောမှာ အားလုံး၏လက်တွဲပူပေါင်းပြီး အပြစ်ပေးခြင်းအား ခံလိုက်ရသည့်အပြင်ကို အခုလည်းဟေးရွှေလမ်း ပြည်သူလူထု၏ group chat ထဲမှာပါ အလောင်းကို ကျာပွတ်နှင့်ရိုက်သလိုကို ထပ်ဆင့်အပြောအဆိုခံနေရ၏။
ဒီနှစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပင် ဟေးရွှေလမ်းသည် မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လျက်ရှိလို့လာပြီး လူတွေဟာဆိုရင်ရောက်လာလိုက် ထွက်သွားကြလိုက်နှင့်အတူ အသစ်ပြောင်းရွှေ့လာကြသူများလည်းရှိသည်။ Group ထဲကအကုန်လုံးကတော့ ဒေသခံလူတွေဖြစ်ပြီး (၁၀)နှစ်ကျော်ကြာ အိမ်နီးနားချင်းတွေဖြစ်သည်။အများစုကတော့ အချင်းချင်းရင်းနှီးလျက်ရှိကြသည်မှာ အိမ်သားလိုလိုပင်ဖြစ်လို့နေကြပြီ။
တစ်ခါက လေကျစ်တစ်ယောက် သူ့အား ညည်းညူပြခဲ့ဖူးသည်။ ဒီGroup ရှိလာပြီးကတည်းကစလို့ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်တည်ရှိမှုဆိုတာက နည်းနည်းလေးတောင်မရှိတော့ ဟုဆို၏။
ကျောင်းလစ်ပြီး အင်တာနက်ဆိုင်သွားသည့်အခါတုန်းကဆို ဆိုင်ရှင်သူဌေးက ရယ်ရယ်မောမောဖြင့် ပြောလို့လာ၏။
"ကမ္ဘာကြီးကြီးသလိုပဲ သတ္တိတယ်ကြီးပါလား ၊ မင်းရဲ့ အခြားကလေးတွေနဲ့မတူတဲ့ သတ္တိကိုတော့ ငါအတော်လေးသဘောကျသွားပြီ။"
ထိုနောက်တွင်တော့ တစ်ဖက်သို့လှည့်လျက် လေကျစ်တစ်ယောက် mouse ကိုကိုင်ထားရင်း ဂိမ်းကို log inဝင်နေသည့် HDပုံအား Groupထဲသို့တင်လိုက်ပြီး လေကျစ်၏ အဖေနှင့် အမေကိုmentionခေါ်လျက် စာပါဖြည့်စွက်ရေးလိုက်သေးသည်မှာ - မင်းတို့ရဲ့သား အတန်းမတက်ပဲ လစ်ပြီးဂိမ်းလာဆော့နေပြန်ပြီ ဟူ၏။
လေကျစ်၏ အဖေနှင့်အမေမှာ ချက်ချင်းပဲ ဆိုင်ကအလုပ်တွေကို ပစ်ချထားခဲ့ပြီး အင်တာနက်ဆိုင်သို့အလစ်ဝင်လျက် blockသုံးခုပိုင်းပြီး လေကျစ်အား အမိဖမ်းလေတော့သည်။
ရှဲ့ယွီသည် ဆံပင်တွေကို တဘက်နဲ့သုတ်လို့နေစဉ်မှာပင် တစ်စုံတစ်ယောက်က သူ့အားရုတ်တရက်ကြီး mention လို့လာလေသည်။
[Barbecueမင်းသားလေး • Lei] : @XY ဘယ်လိုစဉ်းစားစဉ်းစား ၊ ညမအိပ်ပဲစဉ်းစားတောင် အဲ့ကောင်ကို သိပ်အပေါ်စားဆန်တဲ့ကောင်လို့ ထင်မိတယ် မင်းပြောစမ်း ဟုတ်တယ်မလား။
ဒါက သူ့ကိုပါဆွဲခေါ်နေတာ ၊ ဒီအကြောင်းအရာက ပြီးမပြီးနိုင်တော့ဘူးလား။ ရှဲ့ယွီသည် စာတချို့ပြန်ရိုက်လိုက်သည်။
[XY] : ငါ့ကိုဆွဲမထည့်စမ်းနဲ့ ၊ ငါက ဖြောင့်မတ်တဲ့ နိုင်ငံသား။
[Barbecueမင်းသားလေး • Lei] : . . . . . .
[Barbecueမင်းသားလေး • Lei] : အရှက်မရှိလိုက်တာ ၊ မင်း လူကိုရိုက်တုန်းကကြ ဖြောင့်မတ်တဲ့နိုင်ငံသားပါလို့ ဘာလို့မတွေးတာလဲ?!
Question King အဆင့်ဆင့်ယှဉ်ပြိုင်ပွဲဂိမ်းအား အောင်မြင်စွာပင် install လို့ရသွားခဲ့ပြီ။
ရှဲ့ယွီသည် ထိုQuestion King အား ပိုလို့ပင်စိတ်ဝင်စားလို့လာရပြီး ခပ်မြန်မြန်ပင် စကားပြောနေသည်အား အဆုံးသတ်လိုက်၏ - မင်းနဲ့ စကားမများတော့ဘူး Barbecue မင်းသားရေ ၊ ဂိမ်းသွားကစားတော့မယ်။
နှစ်ဦးသားဟာဆိုလျှင် ဂိမ်းဆိုသည့်အပေါ် ၌ သိရှိနားလည်ထားမှုမှာ အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိ၏။ ကျိုးသာ့လေကလည်း puzzle gameပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ League of Legends ပဲဖြစ်ဖြစ် ကစားရတာကိုကြိုက်နှစ်သက်၏ ၊ ဂိမ်းဆိုရင် အားလုံးလိုလိုကိုကြိုက်ပြီး ချေးလည်းမများချေ။ ဂိမ်းကစားရာနေရာမှာလည်း အရည်အချင်းရှိသူ တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ အရင်ကဆို အခြားသူတွေဘယ်လိုပဲသေအောင်ကြိုးစားကြိုးစားအနိုင်မတိုက်နိုင်သည့် အစွမ်းအစအပြည့်ရှိရှိနဲ့ ထိပ်ဆုံးကရပ်တည်လျက်ရှိတဲ့ ဟေးရွှေလမ်းက ကစားသမားKing တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးလေသည်။
ထို့ကြောင့်လည်း အကင်ဆိုင်မင်းသားလေးမှာ ချက်ချင်းဆိုသလိုပင် သက်ဝင်လှုပ်ရှားလို့လာလျက် ရှဲ့ယွီအား private message ကနေပြီး သွားရောက်မေးမြန်းလေတော့၏ - ဘာဂိမ်းလဲ ၊ အသစ်ထွက်တဲ့ Chicken King Wars လား? အတူဆော့ကြရအောင်!
[XY] : မဟုတ်ဘူး။
[XY] : မေးမနေနဲ့ ၊ မင်းနဲ့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။
[XY] : မင်း ကစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
သုံးစက္ကန့်လောက် ငြိမ်သက်သွားပြီးနောက်. .
[Barbecueမင်းသားလေး • Lei] : ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို မဖြစ်ဘူးဆိုပြီး မပြောနဲ့ ၊ မင်းပြော ၊ မင်းပြောလိုက်တာနဲ့ ဒီကအစ်ကိုကြီးက မင်းကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာ Top 10 ဝင်အောင်လုပ်ပြမယ်။
ကျိုးသာ့လေသည် ဆေးလိပ်ကိုမီးငြိမ်းသတ်လိုက်ပြီးနောက် ယောက်ျားလေးအချင်းချင်းကြားကထိုတိုက်ပွဲအား ရင်ဆိုင်ဖို့ရန်အသင့်ပြင်လိုက်သည်။ သူ ရှဲ့ယွီပို့လာခဲ့သည့် ဂိမ်းမျက်နှာဖုံးအားတွေ့ပြီးနောက် ရလဒ်ကတော့ဖြင့် ___ ___ အကယ်၍ ဒါကိုသာ ဂိမ်းလို့ခေါ်နိုင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့လေ ၊ လူက ရုတ်တရက်ကြီး မိုးကြိုးပစ်ခံလိုက်ရသလို ကြောင်အမ်းအမ်းဖြစ်သွားခဲ့ရ၏။တုန်ယင်နေသည့်လက်ဖြင့် ခုနကလေးမှပို့ထားခဲ့သည့် ဆိုးရွားလှသည့်စာကြောင်းအား ပြန်၍ဖျက်လိုက်ရသည်။
ထို့နောက်တွင်တော့ သူသည် voice message ခလုတ်အားဖိပြီး စာပြန်လိုက်လေသည်။
ငရဲဆန်သော အိုလံပစ်သင်္ချာ ၊ ဟွမ်ကမ်း(မြို့) က မေးခွန်းစစ်စစ် ၊ စံပြုထားသည့် အင်္ဂလိပ်စာ ၊ ဓာတုရူပဇီဝ ပေါင်းစည်းထားမှု. . . . . . အဆိပ်အတောက်တွေပဲ။
"ဒါကဂိမ်းလား? ဒါကဂိမ်းဖြစ်နိုင်လား? ဂိမ်းဆိုတာကို မင်းကဘယ်လိုမျိုးနားလည်ထားတာလဲ?"
ကျိုးသာ့လေမှာ နှလုံးထဲကနေပြီး အပေါက်တွေ အမာရွတ်တွေဗရပွဖြင့် နာကျင်မှုအားတဖျဉ်းဖျဉ်းခံစားလို့လာရပြီး အဆုံးတွင်တော့ နက်ရှိုင်းလှသည့် စိတ်နှလုံးအတွင်းမှနေ ဖျစ်ညှစ်ထုတ်ပြီး မေးခွန်းတစ်ခုမေးလိုက်ပါ၏။
[XY] : မသိဘူး ၊ ဆိုးတော့မဆိုးပါဘူး။
Question King အဆင့်ဆင့်ယှဉ်ပြိုင်ပွဲဂိမ်းအား onlineတွင်ကစားကြသူများမှာ (၄၀၀)ပင်မကျော်ချေ။နာမည်လည်းမကြီးလှပဲ ရိုးလည်းရိုးရှင်းလွန်းပြန်သည်။ အချိန်မရွေး ပိတ်သိမ်းပစ်နိုင်သည့်အငွေ့အသက်တွေအပြည့်လည်း ရရှိလို့နေ၏။
ဝင်ရောက်လိုက်ပြီးနောက်တွင်တော့ အလျဉ်းသင့်ပြုလုပ်ထားသည့် မေးခွန်းစာရွက်နှင့် ပက်ပင်းတိုးလေတော့သည်။ သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ အမှတ်အရေအတွက်ကိုစုဆောင်းမိပြီဆိုမှပဲ ဒုတိယအဆင့်သို့ဝင်ရောက်လို့ရမှာဖြစ်သည်။ မေးခွန်းရွေးချယ်လို့ရပြီး ကစားသူချင်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် PKဆွဲရမည်ပဲဖြစ်သည်။
ထိုဂိမ်းတွင် ခရာငယ်ပုံလေးနဲ့ ဖန်ရှင်တစ်ခုလည်းပါဝင်သေးပြီး ဘယ်ဘက်အောင်ထောင့်တွင်တော့ ကွန်ပြူတာဖန်သားပြင်ထက်က စာကြောင်းတွေကို အထက်အောက်ရွှေ့ဖို့နှင့် ကစားသူချင်းဆက်သွယ်ဖို့ရာ boxကလေးလည်းပါဝင်သည်။ သို့တိုင် ဒီဂိမ်းအတွက် ဖလှယ်ဖို့ရာအကြောင်းအရာထက်တော့မပိုပေ. . .
'Top10 ဝင်သူ' က 'အင်္ဂလိပ်စာအတန်း ကိုယ်စားလှယ်' ကိုပြောသည်မှာ - အတွက်အချက်သချင်္ာကို လာယှဉ်လှည့် ၊ သေချာပေါက် ငါ မင်းကို ရှက်ရွံ့သိမ်ငယ်စိတ်တွေပြန်ပေးမယ်။
'အင်္ဂလိပ်စာအတန်း ကိုယ်စားလှယ်' က 'Top10 ဝင်သူ' အားပြောသည် - ယဉ်ကျေးမှုမရှိလိုက်တာ။ စိတ်ဝင်စားလား ၊ မင်းမှာ အဲ့အရည်အချင်းရှိရင် အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေ သွားကျက်နေလိုက်။မင်းရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ ၊ ငါပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် မင်း level 8 ဝေါဟာရပမာဏကိုတော့ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဝေါဟာရတွေကို level4လောက်နဲ့တစ်နေပြီး ရပ်ပစ်လိုက်ရင်တော့ အနာဂတ်ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ မင်း ကိုယ့်ကိုယ်သေချာပြန်သုံးသပ်ကြည့်။
'တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနက အလှလေး' - ဘာ အင်္ဂလိပ်စာကျက်မှာလဲ ၊ ပင်ပန်းတဲ့အချိန်ကျရင်တရုတ်ယဉ်ကျေးမှု ပင်လယ်ကိုသာလာ အနားယူပြီး အားပြန်ဖြည့်လိုက်။ တရုတ်စာပေကို PK လို့ရမယ် ၊ ပကတိရိုးရှင်းပြီး အလိုကျစေရမယ် ၊ အတွေ့အကြုံ နှစ်ဆ ၊ အခန်းက 24008 ၊ ရေစက်ဆုံမယ့်လူကို စောင့်နေပါတယ်။
'ငါ စာလေ့လာရတာကို နှစ်သက်တယ်' - မေးခွန်းစာစောင်B က နံပါတ်(၁၃)အပုဒ်ကို ရှင်းပြပေးဖို့ဘုရားသခင်ကို တောင်းဆိုပါတယ် ၊0or -1 က နောက်ဆုံးအဖြေမဟုတ်ဘူးလား? ပေးထားတဲ့ သုံးရမယ့် အချက်အလက်တွေကပဲ မမှန်လို့လား?
'StudyStudyStudy ငါ့ဘဝထဲဒါပဲရှိတယ်' - တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ (၄၀)နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ထုတ် limited edition တစ်စုံကစျေးတော့မြင့်တယ် ၊ 《တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကို ကျော်လွှားမယ် - တစ်ကြိမ်လုပ်တာနဲ့ တန်လှတဲ့ နမူနာမေးခွန်း》 ၊ ရှိသမျှစာအုပ်ဆိုင်တိုင်းကို သွားတာတောင် ဝယ်လို့မရခဲ့ဘူး ၊ဒီနမူနာမေးခွန်းအစုံကို ငါမရလိုက်တုန်းက ထမင်းလည်း မစားနိုင်နဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် 20 kg တောင်ကျသွားတယ် ၊ စိတ်ထဲနေလို့ကိုမကောင်းဘူး ၊ တက္ကသိုလ်စာမေးပွဲကို ကျော်လွှားမယ် ဆိုတဲ့အဆက်လိုက်က ငါအကြိုက်ဆုံးစာမေးပွဲစစ်မေးခွန်းလွှာပဲ ၊ Limited edition ကိုငါဘာလို့ မရလိုက်ရတာလဲလို့! ! !
ရှဲ့ယွီမှာ (၃၉၉)ယောက်မြောက် စာရင်းပေးသွင်းသည့် ကစားသူဖြစ်၏။ ဤဂိမ်းမှာ တကယ်လည်းသိပ်ပြီး ပေါ်ပြူလာမဖြစ်လှ။ စနစ်(System)ကတော့ (၂)မိနစ်အတွင်းမှာပင် အသံလွှင့်ပြီး နွေးထွေးစွာပင်ကြိုဆိုလို့လာလေသည်။ ထို့အပြင် ကစားသူ၏ နောင်အနာဂတ်အတွက်ပါ စိတ်အားထက်သန်စွာဖြင့် အစားမျှော်မှန်းပေးလျက်ရှိသည်မှာ - အသိပညာဟူသည့် သမုဒ္ဒရာထဲ လွတ်လပ်စွာကူးခတ်ပါ ၊ လှပတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံတော်ကြီးကို တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးပမ်းပါ ၊ ချင်းဟွာတက္ကသိုလ် နဲ့ ပေကျင်းတက္ကသိုလ်က သင့်ကိုလက်ယပ်ခေါ်နေပါတယ်။
ရှဲ့ယွီသည် ဝင်ရောက်လိုက်ပြီး မေးခွန်းလွှာတစ်စုံအား ဖြေဆိုဖို့လုပ်သည်။
System သည်လည်း ဆက်လက်ပြီးလည်ပတ်လျက်ရှိနေတုန်းပင် - [jsdhwdmaX] ကို Question King အဆင့်ဆင့်ယှဉ်ပြိုင်ပွဲမိသားစုကြီးထဲသို့ ဝင်ရောက်လာဖို့ ကြိုဆိုပါတယ်!
ထိုအချိန်၌ online ပေါ်တွင်ရှိနေကြသည့် ကစားသူများမှာ လူအသစ်ဝင်ရောက်လာသည်ကိုမသိကြသေးပေ ၊ Username မှာလည်း မျက်နှာကိုပွတ်နေရင်းနဲ့ keyboardပေါ်ဖြစ်သလိုရိုက်ထားသည်နှင့် တူနေရော့၏။ ထိုလူသစ်မှာကား နွေရာသီအားလပ်ရက်တွင် သွေးထွက်သံယို သတ်ပွဲဖြစ်ပြီး ကြမ်းကြုတ်မှုသရဖူဆောင်းထားသူ။
ကျိုးသာ့လေသည်လည်း မေးခွန်းလွှာတစ်စုံအားဖြေဆိုဖို့လုပ်သည်။ ဇွတ်အတင်း မရမကတောင်းဆိုလျက်ရှိသည့် မေးခွန်းတိုင်းအတွက် အဖြေအကွက်တွေအားလုံးထဲသို့ ရွဲ့ရွဲ့စောင်းစောင်း ခပ်သော့သော့လက်ရေးများဖြင့် ရေးထည့်ပစ်လိုက်သည်မှာ - မရဘူး။
သူ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်နားက တင်သွင်းသည့်ခလုပ်ကိုနှိပ်လိုက်စဉ်တွင်တော့ အမှတ်နည်းလွန်းနေခြင်းကြောင့် Game Hall ထဲဝင်နိုင်မည့် အရည်အချင်းမရှိပါဟူ၍ အကြောင်းပြန်ကာလာသည်။
ကျိုးသာ့လေမှာ ဖုန်းကိုပင်လွွှင့်ပစ်ချင်သွားရ၏ - ခွဲခြားဆက်ဆံတာပဲ! စာညံ့တဲ့ကျောင်းသားကိုခွဲခြားခွဲခြားလုပ်တာ! စုတ်ပလုတ်တုပ်ဂိမ်းပဲ ၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကရဲ့ ဘုရင်ဖြစ်တဲ့ငါ့ကို Game Hall ထဲတောင်အဝင်မခံဘူးပေါ့? မလုပ်နိုင်မှတော့ မလုပ်ဘူးပေါ့ကွာ ၊ မလုပ်နိုင်တော့ ဘာဖြစ်သေးလဲ ၊အနည်းဆုံးတော့ ငါရိုးသားခဲ့တာပဲ!
ဒီလိုနဲ့ပဲ ရှဲ့ယွီ မေးခွန်းလွှာအားဖြေဆိုပြီး၍ထွက်လာချိန်တွင်တော့ Barbeque မင်းသားထံမှနေပြီးwechat messageတွေ ဆယ်ခုကျော်လောက်ကို လက်ခံရရှိလို့ထား၏။
-ဘယ်လိုလုပ် ဖြေရှင်းနိုင်မှာလဲ ၊ ဒါက လူတွေလုပ်ဖို့အတွက် မေးခွန်းတွေရောဟုတ်ရဲ့လား?
-မကျေနပ်ဘူး ၊ ငါသွားကိုတိုင်မယ်!
ရှဲ့ယွီသည် screen ထက်သို့ လက်ချောင်းဖြင့် ဟိုဒီအနည်းငယ်ပွတ်၍ စာရိုက်လို့ပြီးနောက် ပို့ဖို့ရာနှိပ်မည်ပြင်ခိုက် ကျိုးသာ့လေထံမှ စာတစ်ကြောင်း ထပ်မံပို့လာသည်အားတွေ့လိုက်၏ - မင်းအမှတ်ဘယ်လောက်ရလဲ?
ရှဲ့ယွီသည် ခုတင်ကိုကျောမှီ၍ ကြမ်းခင်းထက်ထိုင်ချလိုက်ပြီး မကြာသေးခင်ကမှရိုက်ထားသည့်စာလုံးတချို့အား တစ်လုံးချင်းပြန်ကာဖျက်လိုက်၏။
[XY] : မင်းနဲ့သိပ်မကွာပါဘူး။
[XY] : အစုတ်ပလုတ်ဂိမ်း ၊ Uninstall လုပ်လိုက်ပြီ။
ကျိုးသာ့လေသည် ပါးစပ်ကဆေးလိပ်ကိုခဲ၍ထားရင်း သေတ္တာဘေးနား ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လျက် လူ့ဘဝအကြောင်းတွေးတောကာနေမိသည်။ ခါး၌မှာတော့ အေပရွန်တစ်ထည်အားပတ်လို့ထား၏ ၊ အပေါ်တွင်မူ အနီရောင်ဖြင့် 'ဖန်းပေါင်လိုင် နေကြာစေ့ဆီ' ဟူ၍ စာလုံးအလှရေးထိုးကာထားသည်။ တစ်ချက်ကြည့်လိုက်သည်နှင့် ကုန်တိုက်က နှစ်ထည်ဝယ်တစ်ထည်လက်ဆောင် ဆိုင်ခါလျှော့စျေးမှန်းသိသာလှသည်။
သူသည် ရုပ်မဆိုးလှချေ ၊ အချိုးကျ တည်ကြည်သည့် ရုပ်ရည်ရှိသည်ကိုမှ အပေအတေစရိုက်ဖြင့်အနည်းငယ်ဆိုးသွမ်းသည်သာ။ ယခုလို ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်နေပုံကဖြင့် လူရမ်းကားပုံစံပိုလို့ပင်ပေါက်နေလေတော့သည်။
ကျိုးသာ့လေအမေသည် လင်ပန်းကိုကိုင်၍ ဝင်လာရင်းမှ သူ့ရဲ့ထိုပုံစံကိုမြင်တော့ ဒေါသမထွက်ပဲမနေနိုင်ဖြစ်လျက် ခြေကိုမြှောက်၍ ကျိုးသာ့လေ၏တင်ပါးအား ကန်ထည့်ပစ်လိုက်လေသည်။
"ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီး ဘာလုပ်နေတာလဲ! ဆိတ်သားက ကင်ပြီးလို့လား?"
"အခုချက်ချင်းသွားမယ် ၊ ချက်ချင်းလုပ်မယ်။"
ကျိုးသာ့လေသည် ခပ်သွက်သွက်ထရပ်လိုက်ပြီး ရှေ့သို့နှစ်လှမ်းလောက်လျှောက်ပြီးကာမှ ဘာကိစ္စကိုသတိရသွားသည်မသိ နောက်ပြန်လှည့်လာရင်း ပြောလို့လာသည်။
"ခဏလေး မား ၊ ကျွန်တော် မေးစရာရှိလို့။"
ကျိုးသာ့လေ အမေမှာ ညင်ညင်သာသာပဲ ပြန်လို့ဖြေသည်။
"မသိဘူး ၊ ပိုက်ဆံမရှိဘူး ၊ မင်းကိုချစ်ခဲ့ဖူးတယ်။"
"အတည်နေပေးလို့ရမလား။ ကျွန်တော် ဟိုဟာမေးချင်လို့ ၊ အလယ်တန်းတုန်းကလေ ရှဲ့ယွီအဆင့်အရမ်းကောင်းတာ မားမှတ်မိလား ၊ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့လမ်းရဲ့ ကိုယ်စားပြုအနေနဲ့သင်္ချာပြိုင်ပွဲကိုလည်းဝင်ပြိုင်ဖူးသေးတယ်လေ ၊ ဆုလည်းရတယ်။ ပြီးတော့ ငယ်ငယ်တုန်းကဆို rubik tube ကစားတာမှာ သူက မျက်စိမှိတ်ပြီးတောင်လှည့်နိုင်တယ်ရယ် ၊ တကယ်မိုက်တယ်. . . . . . "
ကျိုးသာ့လေ၏အမေသည် ပေရေနေသည့်ပန်ကန်ပြားအား ဆေးတဲ့ကန်ထဲသို့ထည့်လိုက်ရင်းမှ. .
"အဲ့တော့ ဘာဖြစ်လဲ ၊ နင့်အမေ ငါငယ်ငယ်တုန်းကဆိုလည်း စာမေးပွဲဖြေရင် ဘာသာတိုင်းအမှတ်ပြည့်ရတာပဲ ၊ နောက်တော့လည်း အရင်လိုဘယ်ဟုတ်တော့မလဲ။ လူဆိုတာက အရွယ်ရောက်လာရင် ပျက်စီးတတ်သေးတာ ၊ ဥပမာအနေနဲ့ဆို မင်းပေါ့ ၊ မင်းရဲ့ အခုပုံစံကို မင်းကြည့်လေ။"
ကျိုးသာ့လေသည် စိတ်ထဲက ဝိုးတဝါးအတွေးတို့အားကြိုးစား၍ ဖမ်းဆုပ်စုစည်းလိုက်ရင်း. .
"မဟုတ်ဘူး ___ ___ မား ၊ ကျွန်တော်တော့ မဟုတ်ဘူးလို့ထင်တာပဲ. . . . . . ပြီးတော့ ကျွန်တော်က အခုဘာဖြစ်နေလို့လဲ ၊ ကျွန်တော်ကိုယ်ကျွန်တော်တော့ အတော်လေးချောတယ်လို့ ယူဆမိတယ်။"
"ချီးကိုချော ၊ နင့်ခေါင်းထိပ်က ရှုပ်ပွထနေတဲ့အရောင်စုံတွေကိုသာ အရင်ရှင်းပစ်စမ်းပါဦး။"
ကျိုးသာ့လေ၏အမေသည် စတင်ကာ လက်ချာရိုက်တော့သည်။
"အခုခေတ်ကလေးတွေများ ကစားဖို့ဆိုတာချည်း ၊ ချက်ချာပါးနပ်ကြတာတော့ ချက်ချာပါးနပ်ကြတာပါပဲ ၊ ဒါကို စာလေ့လာတဲ့စီကြ ဘယ်လောက်များ အားထည့်လို့တုန်း။ ဟိုဘက်လမ်းက အားကျယ် ဆိုတဲ့တစ်ယောက်ကိုပြောရရင် အရင်ကဆို သူ့အဆင့်ကနောက်ဆုံးဘိတ်ချေး ၊ ဒါကိုမှဆေးရုံကဆင်းလာပြီးတဲ့နောက် စာမေးပွဲဖြေတော့ကြ အယောက်တစ်ရာထဲဝင်တယ်ဆိုပဲ ၊ နင်လည်း တစ်ကြိမ်လောက် car accident ဖြစ်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့ ငါတော့ထင်တာပဲ ခေါင်းလေးဘာလေးရှင်း ၊ အတွေးအမြင်တွေရှင်းသွားဖို့လေ။ အခုတော့ တစ်နေကုန် ဂိမ်းဆော့ဖို့ပဲသိ. . . . . . "
"ဆိတ်သားကင် အချောင်း(၂၀)မလား ၊ ကျွန်တော်အခုပဲသွားလုပ်ပြီ။"